Cilmi-Baadhis: Internet-ku Waxa uu ragaadiyaa garaadka iyo Xusuusta qofka - Waadinews | Somali News and Entertainments
Cilmi-Baadhis: Internet-ku Waxa uu ragaadiyaa garaadka iyo Xusuusta qofka
In kasta oo Internerku horumar weyn u horseeday aadanaha haddana waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka dhasha isticmaalkiisa xad-dhaafka ah taas oo burburisa unugyada maskaxdeena. Khuburada ayaa inta badan ka diga saamaynta taban ee xogta laga helo tiknolojiyaddu ay ku yeelan karto caafimaadkeena. Haddaba haddii aad waqti dheer ku qaadato isticmaalka Internetka waxa aad ogaataa in taasi ay saamayn taban kaga tagayso maskaxdaada, waayo cilmi-baadhis cusub ayaa daaha ka fayday in adeegsiga badan ee Internerku uu dhalan dooriyo qaabka ay u shaqayso maskaxdeena taasina ay inoo horseedi karto xusuus liidasho iyo dhugasho la’aan.
Natiijada cilmi-baadhistan oo ay si wada jir ah u sameeyeen Jaamacadaha Western University of Sydney, Harvard University, the Royal College of London, Oxford University iyo the University of Manchester ayaa waxaa lagu faafiyey wargayska “World Psychiatry”. Dadka cilmi-baadhista ka qayb-qaatay ayaa lagu sameeyey tijaabooyin kala duwan oo la xidhiidha xusuusta, iyo laylisyo dhinac garashada ah, iyo waliba shaybaadho maskaxeed.
Cilmi-baadhista ayaa lagu ogaaday in Internetku uu dhalan-gediyo habdhiska iyo kartida garaadka aadanaha, maadaama uu sababi karo isbeddelo kala gedisan oo haleela qaybo ka mid ah garaadka, taaso saamayn ku yeelanaysa xusuusteena, dhugashadeena iyo la dhaqanbka bulshada.
Related Topics:InternetkaSaamaynta Internetka